crossorigin="anonymous"> crossorigin="anonymous"> Gabdhaha Rohinga oo guur qasab ah lagu wado | HimiloNetwork
Posted by: Zakariya in Dunida Muslimka October 1, 2015	0 430 Views
Muqdisho (Himilonews) – Kasoo baxsiga qalalaasaha iyo cadaadiska ka jira gudaha dalkooda, Kumaakun oo haween Rohinga Muslimiin ah ayaa guur sandulle ah ku wajahaya dalalka Thailand iyo Malaysia kadib hayaan dheer oo kaga soo tallaabeen safar doonni.
“Waxaa lay ogolaaday inaan reerkayga wacdo; waxayna igu yiraaheen haddii aan yeelayso qoyska oo dhan ayay dan ugu jirtaa,” Shahida Yunus, oo ah qaxooti Rohinga ah, ayaa u sheegtay New York Times.
“Waan fahmay waxa igu gudban inaan sameeyo.”
22-jiradda Rohingada qaxootiga ah waxay ka hadleysay safarkeedii dheeraa ee ay ku timid koofurta Thailand halkaas oo ay joogtay laba bilood markaas oo loogu yeeray qorshe guur oo lagu geynayo Malaysia haddii ay ogolaato.
Kadib aqbalista heshiiska, Yunus waxay kamid noqotay boqollaalka haweenka Muslimiinta Rohinga ah kuwaas oo rag Rohinga ah oo ku nool Malaysia loo guuriyay.
Haweenka oo dhan lama weydiin dareenkooda kahor heshiiska guurka—qaar ayaa lasoo qiyaanay halka kuwana lasoo jujuubay.
“Waxaan doortay inaan guursado waayo dallaaleydu waxay u baahnaayeen lacag ay igu sii daayaan,” ayay tiri Shahida Yunus.
“Waxaynu ka baqa-cararaynay in nala kufsado. Waxaa dhaanta inuu ku guursado nin Rohinga ah kaas oo na daryeeli kara—halkii lay kufsan lahaa.”
Marka loo eego UNCHR, tirade haweenka Rohinga ee lagu sanulleeyo guur-ka dhanta doonistooda, waxay kor u dhaaftay kumaankun.
-Ballamo Marin-habaabis ah-
Marka loo eego sahmiyaasha, kala kulmista caqado cadaadis badan dhanka waalidka, haweenka Rohinga waxaa duufsada ballamaha hadoodilan ee ah inay Malaysia ku sugeyso nolol dhur iyo dhaqasho leh.
“Dallaaleydu waxba kama warwaraan,” ayay tiri 15-jir gashaanti Muslimad Rohinga ah.
“Haddii uu qof lacag bixiyo, waa inaad raacdaa.”
Wajihista ballamo marin-lumis ah, haweenka qaar ayaa la kulma in la ceebeeyo xiriirkooda. Kiisas badan gudahood, abaan-warayaasha “Seeyada” waxaa la arkaa inay aad u da’ weyn yihiin ama sidii laga filayay aanay u dhaqaalo buurneyn.
“Inkasta oo uu aad iiga fil-weyn yahay, hadana hooyaday ayaa igu qasabtay inaan guursado,” ayay tiri Ambiya Khatu, oo 21-jirad ah, taas oo guursatay oday ku nool Malaysia kadib kolkii uu lacag dhan 1,050$ ku bixiyay in laga soo badbaadiyo gacanta dallaaley ku haysatay gudaha Thailand.
“Ma jirin qof na samata-bixiya. Sidaas ayaa ku oggolaaday.”
Kadib soo samata-bixinteeda, seygu wuxuu u sheegay in haddii aysan guurkiisa dooneyn ay iska magto lacagtii uu kusoo furtay.
Taas waxay ku aheyd maan-diido. “Ma garaneyn afka dalka, marka side ayaan u shaqeeyaa si aan lacagtiisa ugu celiyo,” ayay tiri.
“Sidoo kale malihin wax xigto oo halkan noo jooga, mana lihi wax sharci ah. Sidaas darteed, wax aan ka ahayn inaan guursado iima furneyn.”
Ku tilmaamista ay Qaramada Midoobay ku sheegtay mid kamid ah tira-yarta ugu badan ee la dhibaateeyo, Muslimiinta Rohingya waxay ku wajahayaan maalmo ayaan-darraysan oo takooris ah gudaha dhulkooda.
Next: Yaxye Samatar oo helay fasax uu ku daganaan karo Kanada
La kulan: Ninka – Kahor intuusan Quraacan – Subax kasta Quraac siiya Masaakiinta.